Xukunka sii kordhaya ee raadinta moobiilka | Martech Zone
Arbacada, Oktoobar 24, 2012 Axad, Juun 21, 2015 Douglas Karr
Lahaanshaha degel internet moobiil ahaan maahan ikhtiyaar mana aha inuu noqdo mid ka xumaada kuwa horumariya webka maalmahan. Waxaan ka shaqeyneynay noocyada moobiilka ee dhammaan boggeena iyo boggaga macaamiisha bilo hadda waana la bixinayaa. Celcelis ahaan, waxaan aragnaa in ka badan 10% macaamiishayada soo booqda ay ku yimaadaan aaladda moobaylka. Daaran Martech Zone, kaas oo loogu talagalay qalabka moobiilka, waan aragnaa in ka badan 20% taraafikadayada ka imanaya qalabka mobilada ama kaniiniga!
Shabakada mobilada waa goob faneed si xawli ah u socota. Hoyga in ka badan 4 bilyan oo taleefannada casriga ah ee ku xiran, tirakoobyadu waxay muujinayaan in isticmaalka moobiilku uu dhaafi doono taraafikada desktop-ka illaa 2014. Tan macnaheedu waa nooc kasta oo ganacsi ah oo aad qabato, dhagaystayaashaadu waxay ku jiraan shabakadda moobiilka, waana inaad iyaga gaartaa.
Waxaa jira dabeecad gaar ah oo ku saabsan booqashooyinka moobiilka oo aad uga duwan booqdaha websaydhka caadiga ah. Raadiyeyaasha mobilada ee ku soo dega bartaada ayaa sida caadiga ah booqanaya meheraddaada ama baaraya iibsiga ay sameyn doonaan. AlchemyViral wuxuu isu keenay tan cajiibka ah ee macluumaadka infographic ku saabsan isdhaafsiga moobiilka.
Tags: alchemyviralinfographictaleefanka gacantahagaajinta moobiilkahagaajinta mobiladaraadinta moobiilkastats raadinta moobiilkaseo mobileSEO